गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » रुखलाई अक्सिजन दिने मन्त्रीको फण्डा: राष्ट्रिय ध्वजा दुरुपयोग गरेर चलचित्र जस्तै गरियो नाटक
काठमाडौ । चर्चित प्रस्तोता रवि लामिछाने कै शब्द सापटी लिने हो भने सर्कसमा राख्नुपर्ने व्यक्ति सरकारमा फेरी पुगेका छन् ।
कहिले आफ्नै पैसाले जनतालाई प्राणवायु अक्सिजन किनेर दिए भनेर अनुदानका अक्सिजन सिलिण्डर बोकेर पुग्नुभयो त कहिले रुखले हामीलाई कार्बनडाइअक्साईड दिन्छ हामी रुखलाई अक्सिजन दिन्छौ सम्म भन्नुभयो । यतिसम्मको कहानीमा आइपुग्दा उहाँ कति क्षमताको व्यक्ति हो भनेर आम जनताले बुझिसक्नुभएको छ ।
तर उहाँले नै देखावटी नाटक गर्दा भने अलिक नसुहाउने रहेछ । काठमाडौँबाट भोजपुर जानुपर्ने ७ यात्रुलाई नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै छाडेर उडेको एक रचनात्मक नाटक गर्न लगाइयो ।
मन्त्रीले भनेपछि त केही फण्डा गरिदिनुपर्यो । तर व्यवसायीकतामा ढल्किरहेको नेपाली राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नै मन्त्रीका लागि वली बन्न तयार भयो । गोप्य श्रोतले बताए अनुसार ७ जना यात्रु लिएर जान सकिन्थ्यो ।
तर त्यहाँ केही नाटक गर्नु थियो । राष्ट्रिय ध्वजा बाहकको वेइजत गर्नु थियो र मन्त्रीलाई वाहावाहाको अंक चढाउनु थियो ।
सोमबार बिहानै पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित आन्तरिक टर्मिनल भवनमा पुग्नुभयो । उहाँ बिहान साढे ६ बजे नै पुग्नुभयो ।
दसैंका कारण काठमाडौँ छाड्ने यात्रुको चाप टर्मिनलमा अत्यधिक थियो । सोमबार पनि ३ सय १२ वटा आन्तरिक उडानको सूची थियो । मौसम खराबी कारण काठमाडौँ बाहिरका सबै विमानस्थल नखुलिसकेकाले टर्मिनल भवनमा यात्रुको भीडभाडमै मन्त्री आलेले त्यहाँको व्यवस्थापन नियाल्नुभयो । उहाँको अघिपछि मिडिया (आफू निकट) पत्रकार ल्याइएको थियो ।
मन्त्रीले आन्तरिक विमानस्थल अनुगमन गर्ने खबर पाएपछि उहाँभन्दा अघि नै त्यहाँ पुगिसकेका आन्तरिक टर्मिनलका प्रमुख पूर्ण चुडालले कोरोना संक्रमणको प्रभाव घटेसँगै यात्रुको भीड अत्यधिक बढेकाले टर्मिनल साँघुरो भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री आलेले आन्तरिक टर्मिनलका प्रमुख चुडाललाई भवन भित्र रहेको क्याफे सोनिगाले अत्यधिक महँगो दरमा चिया, कफी बिक्री गरिरहेको गुनासो सेवाग्राहीबाट आएको भन्दै मूल्यबारे निगरानी गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री आलेले आफू पनि एयरपोर्टमा रहेका ट्याक्सीबाट २–३ पटक बिना मिटर ठगीमा परेको घटना बताउँदै विमानस्थलका एसएसपी राजेशनाथ बाँस्तोलालाई त्यसबारे अनुगमन गर्न भन्नुभयो ।
‘यहाँका ट्याक्सीमा मिटर छैन की क्या हो ?,’ उहाँले एसएसपी बाँस्तोलालाई भन्नुभयो ‘मनलाग्दी छ ।
कालो ट्याक्सीवालाले बार्गेनिङ गर्छन् । म पनि एकदुईपटक परेको छु । राति १ हजार माग्छ । धेरै पटक मै पनि परेको छु । राति हिँडेर जान सकिँदैन । यो कसले हेर्ने हो । ध्यान दिनुहोस् ।’
ट्याक्सीपछि उहाँले आइतबारको भोजपुर उडानमा छुटेका ७ यात्रुको घटनाबारे जानकारी लिन निगमको त्यहाँ रहेको कार्यालयका कर्मचारीलाई बोलाउनुभयो ।
मन्त्रीलाई सोमबार बिहानको ड्युटीमा रहेकी अधिकृत रिता बाँस्कोटा, सिनियर असिस्टेन्ट गोविन्द रायमाझी, होम पोखरेल, डिस्प्याचर सुरेश श्रेष्ठ लगायतका कर्मचारीले भोजपुर उडानमा ७ यात्रु छुटेको घटनाबारे बेलिबिस्तार लगाउनुभयो ।
उहाँहरूको भनाइ थियो, ‘विमानस्थल कार्यालयका कारण नभई न्युरोडमा रहेको मुख्य कार्यालय अन्तर्गत टिकट बिक्री गर्ने ‘सेल्स–अफिस’को कमजोरीले यात्रु छुटेको बताइयो । तर त्यो मन्त्री आले जाने भनेपछि सृजना गरिएको फण्डा थियो । तर यात्रुले सास्ती भोगे ।
भएको के थियो भने आइतबार छुटेका ७ यात्रु सहित सोमबार बिहान ९ बजे विमान भोजपुर उड्दै थियो । उहाँहरू आउँदै गरेको खबर पाएपछि मन्त्री टर्मिनल बाहिर निजी वायुसेवाका गाडी पार्किङ क्षेत्र अवलोकनमा जानुभयो ।
उहाँ त्यहाँबाट निगमको ह्याङ्गर पुग्नुभयो । त्यहाँ एउटा ट्विनअटर र एक चिनियाँ जहाज मर्मतका लागि राखिएको थियो । उहाँले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेललाई त्यहाँ छरिएका उपकरण लगायतका सामान व्यवस्थापन गर्न भन्नुभयो ।
निगमको ह्यांगरबाट ८ बजे उहाँ फेरि टर्मिनलमै फर्केर भोजपुरको उडानमा छुटेका यात्रुहरूसँग आइतबारको घटनाबारे जानकारी लिन पुग्नुभयो । यात्रुहरूले आफूहरूलाई निगमकै कारण छुटेको गुनासो गर्न न्युरोड जानु परेको, त्यहाँ टिकट बिक्री गर्ने अधिकृतले गलत व्यवहार गरेको, टिकट लिन पनि कठिनाइ बेहोर्नु परेको गुनासो राखेका थिए ।
मन्त्री विमानस्थल पुगेको डेढ घण्टापछि निगमको आन्तरिक टर्मिनल स्टेसनका प्रमुख शैलेन्द्र साह त्यहाँ आइपुग्नुभयो । उहाँले यात्रु छुट्नुको मुख्य कारण आफ्नो मातहतको स्टेसन र कर्मचारी नभई निगमको न्युरोडस्थित सेल्स अफिस नै भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँलाई मन्त्री आलेले नीजिले यात्रुलाई बोलाई,बोलाई उडाउने अनि सरकारी सम्पत्ति खाली–खाली उडाउने ? भन्दै हकार्नुभयो ।
मन्त्रीसँग झोक्किँदै प्रष्टीकरण दिइरहनुभएका साहलाई मन्त्रीले ‘सेवाग्राहीलाई फोन गरेर किन नबोलाएको ? समन्वयमा किन कमजोरी गरेको ? भन्दै झुटो नबोल्न भन्नुभयो । उहाँले त्यहाँ रहेका निगमका महाप्रबन्धक पौडेललाई भोजपुरका लागि यात्रु छुटाउने को–को जिम्मेवार छन् विभागीय कारबाही गर्न यात्रुहरूकै अघि निर्देशन दिनुभयो ।
‘तपाईंहरूले दुःख पाउनु भयो, सरी है,’ निगमको अभिभावक मन्त्रीका हैसियतले यात्रुहरूसँग क्षमा माग्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अब राम्रोसँग जानु होला, शुभ यात्रा ।’ तर त्यो घटना मन्त्री भोलिपल्ट निरिक्षणमा जाने भन्ने तय निगमसँग पहिले नै भएको र मन्त्रीका सचिवालयको समन्वयमा भावनात्मकता लिन सृजना गरिएको निगमको गोप्य श्रोतले बतायो ।
श्रोतले भन्यो नेपालपनि फण्डा गर्न भारत भन्दा कम भएन । हिजोदेखि आजसम्म मन्त्रीका लागि एक फण्डा रचियो त्यो चलचित्र भन्दा कम थिएन । तर यसले निगमलाई ठूलो घाटा भएको छ भने नागरिकले सास्ती पाएका छन् ।